Knowledge – Page2– ThuThuLay
အမြန် လမ်းမှာ ကားမောင်း တဲ့ သူတွေ အထူး သတိထား ရမယ့် နေရာ (၁၆) ခု ကို ထုတ်ပြန် လိုက်ပြီ
အမြန်လမ်း တစ်လျှောက် ယာဉ်မတော်တဆမှု အများဆုံးဖြစ်သည့် နေရာ ၁၆ နေရာရှိပြီး ယင်းနေရာ များ အရောက်တွင် သတိထား မောင်းနှင်းရန် အမြန်လမ်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးက ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ယာဉ်မတော် တဆမှု အများဆုံးဖြစ်သည့် နေရာများမှာ အမှတ် …
August 15, 2020 By ThuThu Knowledge
တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း စာမေး ပွဲ သည် ကြိုးစား သူ များ အတွက် အောင်မြင်ဖို့ သိပ်မခက်လှသော စာမေးပွဲဖြစ်သော် လည်း ဂုဏ်ထူးများ ပါဖို့ တော့ခက်ခဲလှသည်။ ထိုထက် ပို ၍ တစ်နိုင်ငံလုံး …
August 9, 2020 By ThuThu Knowledge
ရတနာပုံ ကိန်းဆိုက်သဖြင့် သြဂုတ်လအ တွက် ထီဆုကြီး များပေါက်နိုင်သော နေ့နံပိုင်ရှင်များ
ရတနာပုံ ကိန်းဆိုက်သဖြင့် သြဂုတ်လအ တွက် ထီဆုကြီး များပေါက်နိုင်သော နေ့နံပိုင်ရှင်များ ၂၀၂၀၊သြဂုတ်လအတွက် ကြာသပတေးနှင့်သောကြာသားသမီးများ ရတနာပုံကိန်းဆိုက်သဖြင့် ထီဆုကြီးများ ဆွတ်ခူးနိုင်သည်။ ထီပေါက်ကံ အားကောင်း နေတတ်သည်။ ကြာသပတေးသားသမီးများ ရတနာနက္ခတ်၂၄လုံး ကျရောက်ချိန် ၂၀၂၀၊သြဂုတ်လ(၁၃)ရက်၊နံနက်၉နာရီတိတိမှ နံနက်၉နာရီ၄၀မိနစ်အတွင်း …
၁၀ တန်း မအောင်ပဲ ဘဝကို အောင်မြင်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတစ်ဦးနှင့် အတွေ့အကြုံ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်က အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတစ်ယောက်နဲ့ အလုပ်ကိစ္စစကားပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူက IT company လေးတစ်ခုပိုင်တယ်။ ဟိုဟိုဒီဒီအကြောင်းတွေပြောရင်းနဲ့ ဘဝမှာ ကျရှုံးမှုတွေအကြောင်း ရောက်သွားတယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့ ဘဝမှာအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေအကြောင်း ကြားရတာအပ်ကြောင်းထပ်နေပြီမို့ စိတ်မဝင်စားပါ။ အကြိမ်ကြိမ်မအောင်မြင်ပြီးမှ အောင်မြင်လာတဲ့ အက်ဒီစင်ဘာညာဆိုတာလည်း …
၈ လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီး ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲ.. ? ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့လဲ..? (သမိုင်းအမှန်ကို လူငယ်တိုင်း သိထားသင့်ပါတယ်)
၁ ၉ ၈ ၈ အရေးတော်ပုံ ကို စစ်အာဏာရှင် ကာလ တလျောက်လုံး လူသတ် ၊ ခေါင်းဖြတ်၊ မင်းမဲ့ စရိုက် ကြီးစိုးတဲ့ ဖြစ်ရပ်အဖြစ် ပုံဖေါ်ခဲ့ကြ တယ် ။ အရေးတော်ပုံ …
August 8, 2020 By ThuThu Knowledge
ဒီနေ့ ရောက်တိုင်း ဒီပိုစ့် ကို ကျနော် ရှယ် ပါ တယ် ။ တကယ် တော့ ၈၈၈၈ အစ မှာ လူထုဟာ တကယ့် ကို ကြောက်လန့် နေခဲ့ကြ တာပါ …
လူတွေထိုင်စီးနေတဲ့ ကားတစ်စီးလုံးကို သွားဖြင့်ဆွဲပြခဲ့တဲ့ 81နှစ်အရွယ်အဘွားအို
ကားတစ်စီးလုံးကို သွားဖြင့်သာဆွဲပြခဲ့တဲ့ အသက် 81 နှစ်အရွယ်အဘွားအိုကတော့ အံ့မခန်းလောက်အောင်ပါပဲ ။ Wang Xiaobei အမည်ရှိတဲ့အဘွားအိုဟာ 1934 ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း Shandong ပြည်နယ် ၊ Binzhou ကနေ Amazing Chinese …
August 7, 2020 By ThuThu Knowledge
အိမ်ဦး နတ် ဟုခေါ်ထိုက် သူ (သို့ )ယောင်္ကျားကောင်း ဆို တာ ဒီလိုပါ
မိမိ ၏ ဇနီးသည်ထက် အဆပေါင်းများစွာချောမောလှပသူကို မြင်တွေ့နေပါစေ။Sexy တွေ ကျနေစမ်းပါစေ။ အီစီကလီတွေ လာထုနေပါစေ။ဘယ်လိုပင် ဟန်ရေးလာပြနေပါစေဦးတော့။ကိုယ့်ဇနီးသည်ကလွဲရင် ကျန်တဲ့ မိန်းခလေးများကိုဖုတ်လေတဲ့ငါးပိ ရှိတယ်လို့တောင် မထင်တတ်ပါ။မိမိ၏ ဇနီးသည်ကိုသာ ဂရုစိုက် ကြင်နာလေ့ရှိတတ်ကြပီးအခြားသော မိန်းခလေးများနှင့် ခပ်ခွာခွာ ခပ်တန်းတန်းသာ …
August 5, 2020 By ThuThu Knowledge
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ Standard Army ဆိုသည်မှာ
စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက အစစစ်သား အဆုံး တူညီ(uniform)ဝတ်စုံတွေကို တန်းတူဝတ်ဆင်ကြရပါတယ်၊စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက မင်းသားစတိုင်လ်ဝတ်စုံဝတ်ပြီးငယ်သားကိုတော့ စုတ်စုတ်ပြတ်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူး၊ရာထူးအဆင့်တံဆိပ်ကွာတာကလွဲရင်အားလုံးဟာ တပြေးညီတူညီဝတ်စုံကိုပဲဝတ်ရပါတယ်၊စစ်တပ်ပိုင်စီးပွားရေးတွေလုပ်စရာ မလိုသလို၊ နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ လွှတ်တော်လိုနေရာမှာလည်း ကိုယ်စားလှယ် လုပ်ပြီးစွက်ဖက်ခြင်းမရှိပါဘူး၊နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်ကိုသာထမ်းဆောင်ပြီး ပြည်တွင်းသာမကပြည်ပနိုင်ငံများကပါ လေးစားရတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်ပါတယ်၊ သမ္မတ အမိန့်နာခံရသော ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၏ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် စည်းကမ်းတကျရှိသောစစ်တပ်ဖြစ်ပါတယ်၊ထိုစစ်တပ်အတွက် ပြည်သူပိုင်မြေများကို …
August 2, 2020 By ThuThu Knowledge
တစ်နေ့ တစ်နေ့ ဘာဟင်းချက်ရမလဲ ဆိုပြီး ခေါင်းမကေိုက်ရအောင် တစ်လစာ ချက်ပြုတ်နိုင်ရန် အရသာရှိသော ဟင်းအစပ်တွဲများ
အိမ်ရှင်မတို့ရေ… တစ်နေ့ တစ်နေ့ မနက်မိုးလင်းတိုင်း ဒီနေ့ငါဘာဟင်းချက်ရင် ကောင်းမလဲ ဆိုပြီး ခေါင်းတွေကိုက်နေကြပြီလား… ဒီလိုမဖြစ်အောင် မင်မင်က တစ်လ အတွင်း တစ်မျိုးနဲ့ တစ်မျိုး မထပ်ပဲ ချက်လို့ရနိုင်မယ့် ဟင်းအတွဲအစပ်လေးတွေကို ပြောပြပေးပါ့မယ်နော်… (၁) ဝက်သားနဲ့ငရုတ်သီးကြော် …
August 1, 2020 By ThuThu Knowledge